Yeka Ukushumayeza Ama-Social Networks Kumabhizinisi | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 3, i-2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kunabantu abambalwa engibahloniphayo ngokwezifunda nakazwelonke kwiSocial Media spotlight - kodwa ngikholwa ngokweqiniso ukuthi baqondisa amanye amabhizinisi ngendlela engafanele ngokubeluleka ukuthi batshale imali kuphela kwinethiwekhi yezokuxhumana.
Njengoba nazi, ngiyasebenza kunethoni yokuxhumana nomphakathi, amawebhusayithi wezokuxhumana kanye nezinhlelo zokusebenza zenhlalo. Nginokulandela okuhle impela kumanethiwekhi engikuwo. Umbuzo ukuthi ibhulogi yami yenze kahle kangakanani ngiyabonga kulawo manethiwekhi omphakathi. Ngemuva kwakho konke, laba ngabangani abathembekile kakhulu - inethiwekhi yami! Kufanele babhekele inani elikhulu lomgwaqo, akunjalo?
Ake sibheke izivakashi zokugcina eziyi-143,579 ezibhekiswe kubhulogi lami:
I-Google: izivakashi ezihlukile eziyi-117,607
IStumbleUpon: izivakashi eziyingqayizivele eziyi-16,840 XNUMX
Yahoo !: izivakashi eziyingqayizivele ezingama-4,236 XNUMX
I-Twitter: Izivakashi ezihlukile ezingama-2,229
Phila: izivakashi eziyingqayizivele ezingama-605
I-MSN: izivakashi ezihlukile ezingama-559
Buza: 476 izivakashi eziyingqayizivele
I-AOL: izivakashi ezihlukile ezingama-446
I-Facebook: izivakashi eziyingqayizivele ezingama-275
I-LinkedIn: Izivakashi ezingama-93 ezihlukile
IBaidu: izivakashi ezihlukile ezingama-79
I-Altavista: izivakashi eziyingqayizivele ezingama-54
I-Plaxo: Izivakashi ezingama-41 ezihlukile
INetscape: izivakashi ezihlukile ezingama-39
Ukube bengizolalela yonke i- Ama-Smippies, Ngichithe usuku lonke ngibuyekeza Facebook futhi LinkedIn ukuzama ukwenza imali. Angazi.
Ngisebenzisa okuthunyelwe ngezibuyekezo nokuvuselelwa kulawo manethiwekhi omphakathi, kepha angichithi sikhathi ngiwasebenzisa. Kunezizathu ezimbalwa:
Kunjalo kakade inethiwekhi yami ethenjiwe. Angidingi ukubaphusha noma ukubathengisela - sebevele bangilungele.
Zabo ngenhloso yokuxhumana nami ngalezi zingosi zokuxhumana nabantu akukhona ukuthenga kimi, futhi abalindele ukuthi ngibathengisele. Ngamanye amagama, angizukuhlukumeza ubudlelwane enginabo nalaba bantu.
Ngizoqhubeka nokuzama ukwakha ubudlelwano obusha lapho kunengqondo khona - ngokusebenzisa izinjini. Ngiyazi ukuthi kunabantu abafuna izimpendulo engizinikeza kule bhulogi ngakho-ke ngizogxila ekukhuliseni ukulandela kwami ​​ngokuphendula leyo mibuzo. Kususelwa kwimvume, kunjalo ELIKHULU (uma kuqhathaniswa ne-0.2% traffic evela kunethiwekhi yami), kanye ne- injongo ukubheka izimpendulo engizinikezayo.
Ngabe lokhu kusho ukuthi wenza lokho engikwenzayo?
CHA! Angikukweluleki ukuthi uzibe amanethiwekhi omphakathi noma abantu abakucindezela ukuthi uwasebenzise. Engikwelulekayo ukuthi ulinganise imiphumela yemizamo yakho bese ulungisa amasu akho ngokufanele. Baningi kakhulu abakwaSmippies ngaphandle abashumayela izinzuzo zama-Social Networks ngaphandle kobungoti bokukusiza ukukala imiphumela nokubeka phambili amasu akho ngokufanele.
Phonsela inselelo laba babonisi ukufakazela izinzuzo zemali! Ngatshela abanye ochwepheshe abangenzi nzuzo ku Ubuholi Amabhizinisi namuhla iqiniso - njengebhizinisi, ngilinganisa ukuzibandakanya ngezimpawu zedola. Uma ngimaketha kahle, ngandisa amadola wami wokuthengwa, ngikhulisa amadola ami aphezulu, futhi ngigcina amadola ami okugcina.
Tags: ezenhlalo kwezamabhizinisiimithombo yezokuxhumana ezinkampanisocial mediaSocial Media Marketingukumaketha ezokuxhumana nabantu kwezamabhizinisiukuhanjiswa kwezinkundla zokuxhumana
Feb 4, 2009 ngo-6: 54 AM
Ngicabanga ukuthi unephuzu elikhulu lapho, unikezwe igebe lasolwandle phakathi kwezinjini zokusesha nezinye. Kodwa-ke kungahle kuthakazelise uma umuntu engathola ukulinganiswa kokuguqulwa kwesigaba ngasinye futhi, ukubheka nje izivakashi ezingacabangi ezingaphansi kwento ngayinye.
Feb 4, 2009 ngo-12: 49 PM
Impela! Ngakho-ke isincomo sokukala ngokucophelela - futhi ulinganise ngo- $. Ngiyabonga goacom!
Feb 4, 2009 ngo-6: 41 PM
AMEN !! Ngiyavuma impela. Ngenkathi ungathathi lutho emithonjeni yezokuxhumana, kufanele ube nokuqonda ukuthi ithrafikhi yakho ivela kuphi ngokwemvelo! Noma uthola ithrafikhi kusuka kumasayithi athile ezokuxhumana (okusho iStumbleupon), KUFANELE ulinganise UKUBALULEKA NENJONGO yalezo zivakashi.
Yize… Ngiphinde ngafaka amabhulogi esigabeni esifanayo…
Feb 4, 2009 ngo-11: 28 PM
Ngivumelana nawe 100%! Ukubhloga kufakiwe futhi KUFANELE ube nembuyiselo ekutshalweni kwemali uma kuzosetshenziswa njengezindlela ezizwakalayo zokwenza ukuguqulwa. Baningi kakhulu abakwaSmippies lapho abathengisa ukubhuloga njengeGrail Engcwele, kepha abafundisi izinkampani ukuthi bangayisebenzisa kanjani ngobuciko ibhulogi futhi balinganise imiphumela.
Usesho luyindlela enhle kangako ngoba inhloso ibhalwe ngqo kulelo “bhokisi lokucinga” elincane - noma ngabe yi-PPC noma yi-organic!
Feb 6, 2009 ngo-1: 05 PM
Ngisho naphakathi kwezingosi zomphakathi ungakwenza lokhu. Besilokhu sithumela izindaba nemininingwane kumasayithi amaningana kanti i-twitter isilethela ithrafikhi esezingeni eliphakeme. Kungokwesibili kuzinombolo zizonke, kepha isikhathi esichithwe namakhasi abukwayo akude kakhulu futhi akude kakhulu.
Ngakho-ke kuleyo subset, sigxile ekwenzeni isiqiniseko sokuthi i-twitter iyingxenye yokufinyelela kwethu.
Feb 6, 2009 ngo-9: 04 PM
Ufuna ukwazi, ngabe iTwitter iletha isayithi lakho ithrafikhi eningi kuneSesho? Uma kunjalo, lokho kungaba yinto eshaqisayo impela! Noma kungasho ukuthi sekuyisikhathi sokuthi uthole usizo lwe-SEO noma uqale ifayela le- ibhizinisi lebhizinisi!
Feb 6, 2009 ngo-3: 43 PM
Ngiku-PR futhi nakanjani senza ukwelulekwa / ukushumayela okuningi kwe-SM kulezi zinsuku. Kepha ngihlala ngiqikelela ukukhumbuza amaklayenti ukuthi lezi zinhlelo ezintsha kufanele zibe yingxenye yesisombululo esihlanganiswe ngokuphelele. Amaklayenti ethu amaningi adinga usizo lokuthola imephu yedijithali nokuhumusha okuqukethwe okuhle kumanethiwekhi omphakathi. Kepha ekugcineni kufanele ibuyele kumadola futhi ibonise inani. Futhi ugcizelela iphuzu elibucayi lokuthi iGoogle "yikhasi lakho lasekhaya" futhi kufanele unakekele lowo mthombo kuqala nokubaluleke kakhulu. Ngiyabonga. (ps ngixhumeke nge-Twitter, heh)
Feb 6, 2009 ngo-9: 08 PM
Kuhle lokho! Ngiyajabula ukukubona lapha nge-Twitter - Ngikhuphukela kuma-8% omgwaqo wami ngezinsuku ezisuka ku-Twitter ngakho ngiyayazisa. Ngisanda kuthola ama-50% + ku-Search ngakho-ke nginaka lapho! Autom I ukushintsha feed yami Twitter kusuka Twitterfeed ukuze kungadingi noma yimuphi umzamo ohilelekile!
Feb 16, 2009 ngo-10: 31 AM
Okuthunyelwe okuhle uDoug. Ushaye (ngokubona kwethu) indawo ezwelana kakhulu nokumaketha - ISIKHATHI. Abantu abaningi namabhizinisi bayahluleka maqondana naye futhi abenzi izinqumo ezifundisiwe noma ukulungiswa kohlelo / imisebenzi yabo yokumaketha. Ungangitholi ngephutha, imithombo yezokuxhumana iyithuluzi elihle lokuxhumana, kepha kufanele uhlolisise ukuthi ungakanani umzamo wokutshala imali kuwo ngokuqhathanisa namanye ama-mediums.